Wp/blk/သတ္တဗေဒ - Wikimedia Incubator
< Wp‎ | blkWp > blk > သတ္တဗေဒ
သတ္တဗေဒ (ပါဏဗေဒ) (အဲင်းကလေတ်: Zoology) ယို ထွာဒျာႏ ထာꩻထောင်လွဉ်ꩻ သတ္တဝါႏဖုံႏခရာႏ။ ထာꩻယို အောဝ်ႏ Wp/blk/ဇီဝဗေဒကို ဖ လွဉ်။ သတ္တဝါႏယို အမာꩻထွာခါꩻနုဲင်းမုဲင်ꩻ၊ သုင်ꩻလꩻနုဲင်းမုဲင်ꩻ၊ အအုံအောဝ်ႏ မာꩻဒါႏထာꩻနုဲင်းမုဲင်ꩻ၊ ထိုꩻလုဲင်ႏလွဉ် ပဉ်ရန်းရန်းနုဲင်းမုဲင်ꩻ စတဲင် ကထွားထောင်လွဉ်ꩻဒါႏ ပညာႏရပ်ခြောင်ႏနောဝ်ꩻ ရိုꩻသတ္တဗေဒသွူ။
သတ္တဗေဒထာꩻမော့ꩻ (သမိုင်း) ယို အွဉ်နယ်ခါꩻ ထာꩻထောင်ထွာလွဉ်ꩻ တရစ္ဆာန်ႏခရာႏ ကထိုတသွောင်းလွဉ် တဲႏအွိုးစခါ ဗတွိုႏခေတ်ယိုလဲင်ႏ။ ထာꩻယူႏစွောန်ႏ၊ ထာꩻသေစွို့ꩻလွဉ်ဒါႏ သတ္တဗေဒ အလောင်းယို ဖျော်တွိုႏဆုဲင်ꩻဒျာႏ ခေတ်စိုးတသာကို ရိုꩻကီလဲ့ ထာꩻယိုအစနောဝ်ꩻ အောဝ်ႏဂရိ၊ ရုမ်း (ရောမ) ယဉ်ႏငဲႏရေꩻစိုးကို တွီလွဉ်ဒျာႏသွူ။ အရစ်သတိုတဲလ်၊ ယင်း ဂေးလန်သီး ကအွဉ်စဒါႏ ဇီဝဗေဒခရာႏ စူခြောင်ꩻနောဝ်ꩻ ထွာအရီးလွိုသွတ်ꩻ ထာꩻထောင်လွဉ်ꩻ သတ္တဗေဒခရာႏ။ အောဝ်ႏနောဝ်ꩻထွူ တန်ပြူႏပသာႏယင်း အယ်လ်ဘာတပ်စ် မဲဂ်နပ်စ်၊ တုမ်ႏယင်း မူသလေမ် လုမ်ꩻလာꩻလိုꩻဆာ တသီႏဆရာႏသားဖုံႏ စူခြောင်ꩻဆလ။ ဥရောပဖဲ့ꩻကို ထာꩻသေပညာႏ ကထွိုင်ႏဖောင်းလီ လွဉ်စယင်းဒါႏ ရီနေသဲန့် စိုးကိုနောဝ်ꩻ ထာꩻယူႏထာꩻဖြောဝ် သတ္တဗေဒခရာႏအလောင်း တွူႏတရမ်ꩻ တသာထဲင်းဖျင်။ ကတွူႏတရမ်ꩻသားဖုံႏအကို ဝင်ꩻသေငါꩻအာနောဝ်ꩻ ဗီတေးလိယတ်၊ ယင်း ဝီယီယမ် ဟာဗေး။
ခုမ်စမ်ႏ မန်ႏဖြောင် ထွားအီထာꩻဖြီဖြစ် (အဏုကြည့်မှန်ပြောင်း) တွော့ꩻ ကထွိုင်ႏထွား ထီႏလꩻအီ ထာꩻသားဇျꩻပေႏဖုံႏနောဝ်ꩻလဲင်ႏ ထာꩻယို ထွာလွဉ်ဒျာႏ သဲးလ် cells တီအိုရီ အထျꩻအရီး။ ၁၈၊ ၁၉၊ ၂၀ ရျာꩻဗူႏနေင်ႏဖုံႏကို သတ္တဗေဒယို ထွာလွဉ် Wp/blk/သိပ္ပံခြောင်ꩻစွို့ꩻ ပညာႏရပ်ခြောင်ႏ။ လိုꩻကထုမ်ႏခြမ်ꩻထွားထောင်ဒါႏ ထာꩻဖဝ ထာꩻမော့ꩻ (သဘာဝ သမိုင်း) နုဲင်း အလဲက်သန္ဒား ဗွန်ဟမ်ဘော့လ် နောဝ်ꩻ ထုမ်ႏဆုဲင်းထောင်လွဉ်ꩻ ထာꩻသက်သားဖုံႏ၊ ထာꩻသက်သား အထျꩻအသောင်ယို တုမ်ႏထာꩻသက်သားဖုံႏ အောဝ်ႏရဲးကမ်းလူႏလုဲင်ႏဝင်ꩻ စားမုဲꩻခရာႏ။ တထွောင်းတုမ်ႏတထွောင်း ဟမ်ႏယာႏ၊ လုံးခြာ၊ ကောင်ဖဲ့ꩻ ဗွန်တောဝ်းဝင်ꩻတဲင် ထာꩻသက်သား တုမ်ႏ ဝွေꩻသီးအထျꩻအသောင် ရော့ꩻလေမ်ꩻဝင်ꩻတဲ့ ပီတောဝ်ႏနေနေသွူ။
↑ Bayrakdar, Mehmet (1986). "Al-Jahiz နှင့်ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်တိုးတက်လာခြင်း". ဓမ္မအန်ကာရာတက္ကသိုလ်ဌာန၏ဂျာနယ် 27 (1): 307–315. အန်ကာရာတက္ကသိုလ်. doi:10.1501/Ilhfak_0000000674. Archived 24 February 2021 at the Wayback Machine.
↑ Paul S. Agutter & Denys N. Wheatley (2008)။ ဘဝအကြောင်းကို စဉ်းစားခြင်း - ဇီဝဗေဒနှင့်အခြားသိပ္ပံသမိုင်းနှင့်ဒဿနိကဗေဒ။ Springer။ p. 43။ ISBN 978-1-4020-8865-0။ Cite uses deprecated parameter |lastauthoramp= (အကူအညီ)
↑ Saint Albertus Magnus (1999)။ တိရစ္ဆာန်များတွင်:အလယ်ခေတ်l ဆမ်းမာ့သတ္တဗေဒ။ Johns Hopkins တက္ကသိုလ်စာနယ်ဇင်း။ ISBN 0-8018-4823-7။
Retrieved from "https://incubator.wikimedia.org/w/index.php?title=Wp/blk/သတ္တဗေဒ&oldid=5418207"
Last edited on 29 April 2022, at 15:36
This page was last edited on 29 April 2022, at 15:36.